» दोहोरी भिडन्त कसले जित्ला ?
दोहोरी भिडन्त कसले जित्ला ?
१२ असार २०७८, शनिबार २०:०९
मकवानपुर, १२ असार । चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को नयाँ दोहोरी भिडन्तको एपिसोड शनिबार प्रसारण हुँदैछ । उत्कृष्ट २४ छानिएपछिको यो एघारौँ दोहोरी भिडन्त हो । कोभिड र लकडाउनका कारण शो सुचारु भएता पनि उत्कृष्ट २४ मा पुगेका ४ जोडीहरुको दोहोरी भिडन्त अझै बाँकी थियो । अब भने शनिबारबाट दोहोरी भिडन्तको बाँकी भाग सुरु हुँदैछ । शनिबारको दोहोरी भिडन्तमा जीवन सिग्देल र अस्मिता डिसीसँग बिमाकुमारी अनुरागी र सुरेन्द्र मगरले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
यी दुबै जोडीहरु गायक गायिकाकै रुपमा चिनिएका र लाईभ दोहोरीमा दर्शकहरुको मन जित्न सफल जोडीहरु हुन् । दुबै टिम बलियो भएकोले एकअर्कालाई पछि पार्न यो जोडीहरुको दमदार दोहोरी भिडन्त हुनेछ । प्रोमो सार्वजनिक भएदेखि नै दुबै जोडीहरुबिच कडा दोहोरी भिडन्त भएको अनुमान लाउन सकिन्छ । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट १२ मा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
अस्मिता र जीवन दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा पुगेका पाँचौँ जोडी हुन् । फिजिकल अडिसनमा रोमान्टिक टुक्काहरु सहित दोहोरी भाका प्रस्तुत गरेका उनीहरुलाई निर्णायकहरुले रुचाएका थिए । जीवन स्याङ्जाका र अस्मिता धादिङकी हुन् । त्यस्तै बिमा र सुरेन्द्र दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा पुगेका छैटौँ जोडी हुन् । फिजिकल अडिसनमा निर्णायकहरुले उनीहरुको प्रस्तुतिलाई शुभकामना दिएका थिए । बिमा दोलखाकी र सुरेन्द्र धादिङका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–